Semalt: Iindaba Eziphambili-Ikhasi Kwi-Web Security
Ukuba kukho nantoni abantu abangayifunda ukususela ngonyaka ka-2016, yindlela abazikhusela ngayoekungeneni kwe-hacker. Ngenjongo yokuphakamisa ulwazi, uFrank Abagnale, Semalt Umphathi oyiNtloko wabaPhumelela kwabaThengi, ushicilele ezisixhenxe zeendaba eziphezulu ezifakwe kulo nyaka.
1. I-Dropbox Hack
Ukuhlaselwa okubodwa kwintengiso yeDropbox, enefuthe elikhuluabasebenzisi balo. Kwaphumela ekugqibeleni ngokubanzi ngamajelo ashicilelweyo njengoko kukho izigidi zeakhawunti yomsebenzisi. Yisiganeko esagqityiweyoimfuno ebalulekileyo yokuba abantu basebenzise iphasiwedi ezinamandla kunye neengqungquthela, kunye nephulo lokuqinisekisa ukuba iinkampani zinikezela loo mfuno kubaxhasi babo.
2. I-Dyn DNS DDoS Ukuhlaselwa
UDyn ngumnikezeli we-DNS owawa lixhoba lokuqhawula ngo-Oktobha 21 ngo-2016I-botin botnet esetyenziswa ngokubanzi kwii-IoT zixhobo ezikhokelela ekuhlaleni kwamawebhusayithi amakhulu. Akusiyo imfihlo abahlaseli bajolise kwizixhobo ze-IOTngenxa yobungozi babo obuninzi. Nangona kunjalo, into enye abasebenzisi abayifunayo kule ngqungquthela yindlela engaphephile ngayo i-IT xa ingafikaizandla ezingalunganga.
3. UMthetho woPhando loMphefumlo wase-UK
I-UK idlulisele enye yeengxowa-mali eziphambili, iYilwayo yamandla ePhando, okoukwandisa ububanzi bokubekwa kweliso egameni lokunciphisa ubugomeko nokuphucula ukhuseleko. Amagunya e-IT ngoku afumaneke kwiingodo zomsebenzisingaphandle kokufuna i-warrant, njengoko behlala benganyaniseki kwinkqubo yeenyanga ezililishumi elinesibini. Ingxaki iphakamise iingxoxo malunga nokuhlolwa koorhulumentekunye nezilinganiso..Baphakamisa nemibuzo malunga nokuba ubukhulu becala buhamba njani ngokubhekiselele kwimfihlo.
4. I-Bitfinex Hack
I-Cryptocurrency iqalile ukufumana uphulo lobuninzi emva kokuba abahlaseli bangeneUkutshintshwa kweBitfinex. Nangona iqela lihlawulela abasebenzisi balo, abantu baqala ukuphonononga kwakhona isigqibo sokutshala imali kwiBitcoins ukususela kuloo ndlelaabatshintshiselwano abasemngciphekweni abanakuze banikeze umvuzo. Isihloko asikho ngokupheleleyo ngaphandle kwehlathi kodwa njengoko oorhulumente kunye neebhanki baqala ukuwamkelaimbono yokusebenzisa i-bitcoins njengendlela yokutshintshiselana ngemali ngo-2017.
5. I-Cety Exploit Cow
I-COW i-COW Exploit iyingozi kwi-kernel ye Linux evumela abagculi ukuba bazuzeamalungelo okuphatha kwikhompyutha ubuncinane imizuzwana emihlanu. ULinus Torvalds wabika ukuba beyazi kakuhle ukuba khona kwayo kwayeuzame ukuyilungisa iminyaka elishumi edlulileyo. Isebenza njengomzekelo wendlela yeminyaka yobudala be-bugs ebonakala ngathi yintlekele ebalulekileyo kule mihlahlabathi ledijithali, eqinisekisa ukuba uhlolo oluqhubekayo lokhuseleko lwenkqubo.
Unyaka we-2016 ubone ukunyuka kwezihlaselo ze-ransomware. Bajolise uluhlu lwezintoimibutho, enikeza isibonakaliso esicacileyo sokuthi akukho mntu ukhululekile ekuhlaselweni kwe-ransomware. Ukuphakamisa ulwazi malunga namanyathelo okukhusela, kunye nokukhuselwaezinye iindlela zokuhamba ngokukhusela abasebenzisi kwi-ransomware kwikamva.
7. Umngeni we-Cyber ​​Grand Challenge we-DARPA
Umngeni omkhulu we-Cyber ​​yi-DARPA uhlose ukumema amaqela ukuba adibanise kwaye asebenzise inkqubou bunzima. Ezi mingeni zinokubambisana okumbalwa ngabantu njengoko zixhaphake kakhulu
Ixesha elizayo loKhuselo lweNkqubo ngo-2017
Akukho nto ichaza oko kwenzeka ngo-2017. Nangona kunjalo, abahlaseli bahlala bekhangeleu bunzima. AbaHackers bangahle bathuthukise ukuhlaselwa kwabo ukujolisa iTor amanethiwekhi, kunye nezinye izinto ezixhaphakileyo kunye nokusebenzisa uphawu olusisigxinakuyo. Into enhle kukuba phakathi kwezinto ezimbalwa ezenza ukuhamba ngo-2017, ukuqinisekiswa kokhuseleko.